Iibso Gobolka Adag 3KW FM Gudiyaha FU618F oo leh Tayo Sare | FMUSER Radio Turnkey Solution
FMUSER FU618F Gobolka Adag 3KW FM Gudbiye FM Awood Sare ah oo loogu talagalay Xarunta Raadiyaha FM
Qiimaha (USD): 11,000
Rarida (USD): 1,642
Wadarta (USD): 12,642
Xidhmada Idaacada FM-ta oo dhamaystiran
Waa maxay sababta u dooratay FU-618F Adag State 3KW FM ee Xarunta Raadiyaha FM?
Haddii aad tahay hawl wadeen raadiye xirfadle ah, ama aad diyaar u tahay inaad dhisto idaacad FM ah oo xirfad leh, oo aad raadinayso gudbiye FM- adag oo la isku halayn karo oo idaacadahaaga ah, markaa waxaad uga baahan kartaa idaacadan dhammaystiran ee Fmuser: FU618F 3KW Gudbiyaha FM Gobolka Adag.
Kani xaqiiqdii waa gudbiye FM adag oo leh wax qabad la yaab leh, kaas oo dhaxli kara jilayaasha labadaba qiimaha miisaaniyada ee FMUSER FM taxanayaasha gudbinta ay haystaan ​​​​ku dhawaad ​​​​XNUMX sano oo joogto ah, halka sidoo kale ay la timaado faa'iidooyinka tayada sare leh marka la barbar dhigo xawaaladaha FM-ta ee Rohde & Schwarz laakiin leh kala badh ama shan meelood meel (xitaa wax ka yar) oo la mid ah kuwa ay Rohde & Schwarz leeyihiin.
Haddi la eego waxqabadka baahinta ama nolosha adeegga, waxaan kuu xaqiijin karnaa adiga iyo macaamiishaada khibradda baahinta FM-ta ugu wanaagsan tan waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku siin doonaa taageero farsamo oo khadka tooska ah si aan u ilaalino idaacada FM-kaaga madax ilaa lugaha, ogaano awoodaada idaacada, oo u ciyaar awooda ugu wanaagsan ee gobolkan adag 3KW FM gudbiyaha ilaa xad.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waxaanu sidoo kale bixinaa xal raadiye oo kala duwan si aad u tixraacdo oo aad hubiso in horumar kasta oo wax soo saar ah, dib-u-habaynta horumarka, horumarka gaadiidka uu leeyahay hubin tayo leh.
Waxaad si buuxda u rumaysan kartaa gudbiyaha FU618F 3KW FM, sida aad u aaminsantahay FMUSER.
Maqal la mid ah CD-ga
Amplifier-ka Korantada ee 3KW waxa lagu rakibay hal 3U 19inch rack.
4pcs 1KW RF korantada gudaha. Wadarta awooda wax soo saarku aad ayay u degan tahay iyada oo ay ugu wacan tahay AGC (Automatic Gain Control).
Nakhshad is haysta, cabbir yar
Dijitaalka ah 100W kicinta (DSP+DDS).
Analog iyo digital (AES/EBU) gelinta signalka maqalka si toos ah.
8-inji Midabka LCD oo leh guddi taabashada ayaa soo bandhigaysa dhammaan cabbirada waqtiga dhabta ah.
Hawlaha ilaalinta caqliga leh ee qaybta kontoroolka xarunta, sida in ka badan PF, ka badan SWR, ka badan Heer kulka, Voltage, Hadda
TCP/IP/RS232 Isgaarsiin isgaarsiineed oo diyaar u ah nidaamka fog
Halka aad ka heli karto FU-618F Adag Gobolka 3KW FM Faa'iido leh
1* FU-618F 3KW Gudbiyaha FM ee Gobolka Adag
Tusmada Korontada ee FU-618F Wariyaha Gobolka Adag ee 3KW FM
Xaddiga Soo noqnoqda: 87.0MHz～108.0Mhz1. Xadka Soo noqnoqda: 87.0MHz～108.0MHz
Tallaabada Dejinta inta jeer: 10KHz
Saxnaanta inta jeer ee qaadaha: ± 200Hz
Shucaaca Hirarka Hadhaaga ah: ≥67dBc
Wax-soo-gelinta Maqalka: 600Ω, Balance (oo loogu talagalay analoogga); 110Ω, Balance (loogu talagalay AES/EBU dijital ah)
Kala saarida Stereo: 50dB (30Hz ~ 15KHz)
Heerka Gelitaanka Maqalka: ± 10dBm, tallaabo 0.01dB; S/N: ≥75dB(30H～15kHz,100%)
Qallooca Maqalka: <0.1%
Jawaabta maqalka: ± 0.1dB(30Hz～15KHz)
Wax-soo-saarka Culayska: 50Ω
Awoodda wax soo saarka: 0 ~ 3000W la hagaajin karo
Culayska ka hor: 0μS,50μS,75μS
leexashada: ± 75kHz
Soo noqnoqoshada tijaabada: 19 kHz± 1Hz Habaynta Calaamadaha Tilmaanta: 8%～10%
Xakamaynta side-hoosaadkav: ≥65dB
Interface soo saarka RF: 7/8' ama 1-5/8' Flange
Cabbirka: 19 inch rack; 574mm (W) x 1000mm (H) x 880mm (D)